OMG ! श्रद्धा कपूरले कपडा फुकालेर देखाइन यस्तो हर्कत, देखेर तपाई पनि पर्नुहुन्छ चकित – Everest Dainik
OMG ! श्रद्धा कपूरले कपडा फुकालेर देखाइन यस्तो हर्कत, देखेर तपाई पनि पर्नुहुन्छ चकित
श्रद्धा कपूर यति बेला बलिउडकी चर्चित र व्यस्त नायिका हुन । श्रद्धा कपूर बलिउड सुपरस्टार शक्ति कपूरका छोरी हुन । श्रद्धाले आफ्नो बलिउड यात्रा ‘तीन पत्‍ती’ फिल्मबाट शुरूवात गरेकी थिइन ।
यो फिल्म त्यति चले तर श्रद्धाको अभिनयको भने सर्वत्र प्रशंसा गरिएको थियो । र फिल्‍मफेयर अवार्डका लागि नवोदित अभिनेत्री नोमिनेट पनि भएको थियो ।
त्यसपछि श्रद्धाले फिल्म ‘लवका द इण्ड’ (प्रेमको अन्त्य) मा अभिनय गरिन । तर फिल्‍म ‘आशिकी २’ ले उनलाई बलिउड इन्डिष्टीजमा नायिकाको रुपमा स्थापित गर्यो । त्यसपछि श्रद्धालाई पछाडि फर्किएर हेर्नु परेको छैन ।
त्यसपछि ‘एक भिलेन’ जस्तो बलिउडकै सुपरहिट फिल्ममा श्रद्धाको मुख्यभूमिका थियो । सोही फिल्म शुटिङको क्रममा सन २०१४ मा उनले एक फोटोग्राफरलाई दूव्र्यवहार गरेर निकै आलोचित भइन । जसका कारण उनलाई फिल्मका सफलता पार्टीमा पत्रकारहरुले श्रद्धालाई बहिष्कार समेत गरेका थिए ।
त्यस्तै उनको विभिन्न अभिनेताहरुसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । फिल्म आशिकी २ की सफलतापछि उनको नाम आदित्य रय कपूरसँग जोडेर मिडियामा खबरहरु छापिएका थिए । अहिले भने श्रद्धाको सम्बन्ध भारतका चर्चित लेखक जावेद खानको छोरा फरहान खानसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा चलिरहेको छ ।
तर श्रद्धाको भर्खरै एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । जुन भिडियोमा श्रद्धाले खुला फोटो गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
ट्याग्स: ballywood, shraddha kapoor